सेयरमा बजारमा कम्पनी चिनौं, व्यवस्थापकीय विश्लेषण झन् महत्वपूर्ण
डा. बिनोद घिमिरे
काठमाडौं : सन् १६०२, नेदरल्याण्डबाट सुरु भएको सेयर खरिदबिक्री र पुँजी परिचालन आज हरेक मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनिसकेको छ । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने हाम्रो पुँजी बजारको सुरुवात निकै पछि भएको पाइन्छ । विश्वमा सुरु भएको झन्डै ४०० वर्ष पछि सन् १९९४ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को स्थापना भयो । नेप्सेले अहिले बल्ल सुधारको गति समाउन थालेको छ ।
प्राविधिक, कानुनी र व्यवहारिक हिसाबसमेत नेप्से विस्तारै अघि बढ्ने क्रम सुरु भएको पाइन्छ । बदलिँदो परिस्थितिमा पुँजी बजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको जिम्मेवारी भनेको समग्रमा पुँजी बजार थप पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनु नै हो । सीमित पुँजीले असीमित अवसर खोज्न सेयर बजारप्रति आम जनताको आकर्षण कायम हुनुपर्छ ।
तर उचित वित्तीय साक्षरता अभावमा भने पुँजी बजार जोखिमपूर्ण पनि हुन सक्छ । सीमित सूचना वा अरुको देखासिकीमा सेयर बजारमा प्रवेश गर्नु अत्यन्त जोखिमयुक्त हुन्छ। त्यसैले लगानीकर्ताले निकै होसियार र सचेत भएर उचित समयमा उचित सेयर छनोट गर्न सक्नुपर्छ । यो लेख पनि सेयर छनोटमा सचेतना र व्यवस्थापकीय विश्लेषणमा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा केन्द्रित छ ।
सेयर बजार र सचेतना
सामान्यतयः बजारमा सेयरको माग र आपूर्तिले सेयर मूल्य निर्धारण गर्दछ । सेयरमा कसैले गुमाउनु भनेको अरु कसैले कमाउनु हो । कमाउने र गुमाउनेको भीडमा नाफा सुनिश्चित गर्नु सहज काम पक्कै पनि हैन । त्यसैले लगानीकर्ताले अत्यन्त सुझबुझका साथ कम्पनीको वित्तीय यथार्थता, व्यवस्थापन, र बजारको प्रवाहलाई बुझ्न सक्नुपर्छ । अत्यन्त सचेत, सूचनाको सुक्ष्म विश्लेषण गर्ने क्षमताले मात्र यस क्षेत्रमा लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
सूचीकृत कम्पनीको मूल्यांकन गर्ने विविध आयामहरु छन् । जसमध्ये व्यवस्थापनको विश्लेषण एउटा महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ हो । व्यवस्थापकीय पक्षलाइ विशेष मूल्यांकन र महत्व दिने सेयर बजारका विज्ञ फिल फिसरका अनुसार लगानीकर्ताले मात्र नम्बरमा केन्द्रित नभई प्रत्यक्ष व्यवसायबारे बुझ्नु अनिवार्य हुन्छ । कुनै कम्पनीको विश्लेषणमा संख्यात्मकको अलावा गुणात्मक पक्षको अध्ययन अनुसन्धान पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यस सम्बन्धमा व्यवस्थापकीय विश्लेषण प्रभावकारी र उपयोगी ठहर्छ ।
वारेन बफेटका अनुसार यदि विश्वासी, कर्मठ र सक्षम व्यवस्थापन भएको कम्पनीको सेयर खरिद गरिन्छ भने सेयर सरल प्रक्रिया हो । यस्ता कम्पनीको सेयर छनोट गर्नु एक हिसाबले सधैंका लागि सेयर आफ्नो बनाउनु पनि हो । कम्पनीको केन्द्रमा बसेर हरेक मिहिन पक्षसँग जानकार व्यवस्थापन पक्ष सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । बाटो पहिचान गर्ने र गन्तव्यसम्म साथ दिने व्यवस्थापनको अबयबसँग लगानीकर्ता जानकार हुनैपर्छ ।
सञ्चालक समितिसँग समन्वय, कार्यकारी अधिकृतको क्षमता, दक्षता र रणनीतिले कम्पनीको अग्रगामी प्रगतिमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ । यस सन्दर्भमा निश्चित कम्पनी छनोट गर्ने र सक्दो व्यवस्थापकीय पक्षको अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्ने खुबी हासिल गर्न सक्नुपर्छ । भविष्यमा हुन सक्ने वित्तीय सम्बन्धको पूर्वअभ्यास व्यवस्थापकीय विश्लेषणबाट मात्र सम्भव छ ।
वित्तीय विवरण जस्तोसुकै राम्रो भए पनि यदि व्यवस्थापन गोप्य कारोबारमा संलग्न हुन्छन भने यसले कम्पनीको साखलाई क्षण भरमा ध्वस्त पार्दछ र सेयरको मूल्यमा पनि ह्रास ल्याउँछ । स्थिर व्यवस्थापन नभएको कम्पनी धेरै हद सम्म खस्कने सम्भावना हुन्छ । अर्को, यदि ठूलो संख्यामा प्रोमोटर सेयर बिक्री गर्न खोजिएको छ भने त्यसमा कुनै चलखेलको आभाष पाउन सकिन्छ ।
यसैगरी व्यवस्थापकहरुले ठूलो परिमाणमा अनावश्यक खर्च गरिरहेका छन् भने कम्पनी घाटामा जान सक्ने प्रबल सम्भवना हुन्छ । यसका अलाबा व्यवस्थापकीय विश्लेषणमा विचार गर्नु पक्षहरु थप महत्वपूर्ण पक्षहरु यस्ता छन् ।
१ सरल र सहज व्यवस्थापकीय संरचना ।
२ पारदर्शी वित्तीय विवरण ।
३ निरन्तर र दिगो आर्थिक प्रतिफल ।
४ पुँजी परिचालनबाट उच्चतम प्रतिफल ।
५ सेयर सदस्यहरुको हितमा व्यवस्थापनको सकारात्मक सोच ।
६ कम्पनीको आफ्नै पहलमा निरन्तर विकाश र अभिवृद्धि ।
लगानीकर्ताले पुँजी बजारबाट लाभ लिनका निमित पर्याप्त समय दिन सक्नुपर्छ । सीमित सूचना वा अरुको देखासिकीमा यो बजारमा हात हाल्नुहुँदैन । कुनै कम्पनीको सेयर खरिद गर्नुपूर्व सम्बद्ध कम्पनीको विविध आयामबाट मूल्यांकन गर्न सक्नु पर्छ । जसमध्ये व्यवस्थापनको विश्लेषण एउटा महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ मान्न सकिन्छ । सबै कम्पनीहरुको सम्पूर्ण पक्ष विश्लेषण गर्न सहज हुँदैन ।
यसका लागि थोरै र निश्चित कम्पनी मात्र छनोट गर्ने र उक्त कम्पनीको व्यवस्थापन पक्षको विश्लेषण गर्नुपर्छ । कम्पनीको केन्द्र बिन्दु भएर संस्थालाई गन्तव्य सम्म साथ दिने व्यवस्थापन पक्षसँग लगानीकर्ता जानकार हुनैपर्छ । एउटा सचेत लगानीकर्ताले भविष्यमा प्राप्त हुन सक्ने वित्तीय सूचनाहरु अग्रीम रुपमा थाहा पाउन निश्चित कम्पनीहरुको व्यवस्थापकीय विश्लेषण गर्नु अनिवार्य छ ।
सोही अनुरुप माथि प्रस्तुत गरिएका आधारहरुलाई सूचक बनाएर सहि सेयर खरिद गर्नु बुद्धिमानी ठहर्छ । वित्तीय विश्लेषणले भविष्यको आँंकलन गर्न सहयोग गर्छ भने व्यवस्थापकीय विश्लेषणले तत्काल कम्पनीको आँकलन गर्न मद्दत गर्दछ । तुरुन्तै सकारात्मक तथा नकारात्मक वित्तीय सम्बन्धको पूर्व–आभाषमा सेयर खरिद वा बिक्रीको निर्णय गर्न सकिन्छ ।
लगानीकर्ताले यस सम्बन्धि गुणात्मक सूचना भने सहजै प्राप्त गर्न सक्दैनन् । कतिपय कम्पनीहरुको हकमा नियामक निकायको व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । जसमार्फत आवश्यक सूचना हासिल गर्न सकिन्छ । जस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन राष्ट्र बैंकमार्फत हुने हुँदा केन्द्रीय वेबसाइट वा सूचना संयन्त्रबाट आवश्यक सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसको अलाबा, हिजोआज कर्पोरेट सम्बन्धि सूचना प्रदान गर्ने पत्रिकाहरु, टेलिभिजन, सेयर बजार सम्बन्धी अनलाइन सञ्चार माध्यमहरु पनि उपलब्ध छन् ।
अहिले अधिकारिक र जिम्मेवार कम्पनीहरुले सञ्चार माध्यम वा अन्य सूचना स्रोत मार्फत संचालक समितिको निर्णय, साधारण सभाको निर्णयहरु, कम्पनीको भावी योजनाहरुबारे जनतालार्इ सुसुचित गरिरहेका हुन्छन । यी सबै पक्षबारे लगानीकर्ता सचेत हुनुपर्छ ।
यसैगरी साधारण सभामा भाग लिने, कम्पनी अध्यक्षको भाषण सुन्ने, कम्पनीको आगामी नीति तथा कार्यक्रमको जानकारी लिने जस्ता कार्यहरु नियमित कार्य सूचीमा राख्नुपर्छ । विकसित मुलुकमा कार्यकारी प्रमुख तथा बोर्ड सदस्यहरुको हाउभाउ, बोली तथा शब्दहरुको समेत विश्लेषण गर्ने संयन्त्र समेत विकसित भइसकेका छन् । यहि ज्ञान र सूचनाको आधारमा उचित कम्पनीको छनोट र अनुचित कम्पनीबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ ।
(लेखक त्रि. बि. बि. अन्तर्गत व्यवस्थापन संकायको उप–प्राध्यापक हुन्।)
साधना लघुवित्तको आइपीओ भर्नेको ओइरो, यसरी पर्यो आवेदन
मौद्रिक नीति : ब्याजदर कटौती र तत्काल आर्थिक क्षेत्र पुनर्उत्थानका प्याकेज आवश्यक
लक डाउनले आक्रान्त बनेका लगानीकर्तालाई सेयर बजारबाट मिल्यो राहत
धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका कर्मचारीलाई आइपीओ भर्न समेत अंकुश लगाउनुपर्ने सुझाव